MyRadar Weather Radar 7.6.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 25k - 50k
ဗားရွင္း 7.6.2 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ရာသီဥတု MyRadar Weather Radar
MyRadar Weather Radar ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
MyRadar သင်သည်အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့လမ်းလာမယ့်အရာကိုရာသီဥတုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု, သင့်လက်ရှိတည်နေရာန်းကျင်ကာတွန်းရာသီဥတုကရေဒါပြသတဲ့မြန်ဆန်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု, သေးအစွမ်းထက်ရာသီဥတု App ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် app ကိုစတင်ရန်နှင့်သင့်တည်နေရာအထိနှစ်နာရီ၏ရေဒါကွင်းဆက်အရှည်နှင့်အတူကာတွန်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရေဒါနှင့်အတူပေါ်လာမှာပါ။ ဒါကအခြေခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကို on-the-go ရာသီဥတုကတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းလျှပ်တစ်ပြက်ရရန်အမြန်ဆုံးလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး, ထိုသို့နှစ်ပေါင်းများစွာ MyRadar ဒါအောင်မြင်သောဖန်ဆင်းတော်မူပြီတယျ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကို Check နှင့်သင့်တစ်နေ့တာ impact လိမ့်မည်ဟုရာသီဥတုတစ်ခုချက်ချင်းအကဲဖြတ်ရ။
အသက်ရှင်သောရေဒါများအပြင်, MyRadar သင်မြေပုံ၏ထိပ်ပေါ်မှာမွမ်းမံနိုင်သောရာသီဥတုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-ဆက်စပ်ဒေတာအလွှာတစ်ခုအမြဲတိုးပွားလာစာရင်းရှိပါတယ်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာတွန်းလေတိုက်နှုန်း layer သည် jetstream အဆင့်မှာနှစ်ဦးစလုံးရဲ့မျက်နှာပြင်လေတိုက်နှုန်းနှင့်လေတိုက်နှုန်းတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်အာရုံကိုယ်စားပြုမှုပြသ; အဆိုပါတိုကျရိုကျနယ်နိမိတ်အလွှာမြင့်အနိမ့်ဖိအားစနစ်များအဖြစ်တိုကျရိုကျနယ်နိမိတ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြသ; အဆိုပါငလျင်အလွှာပြင်းထန်မှုနှင့်အချိန်အဖြစ်လုံးဝစိတ်ကြိုက်, ငလျင်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများထိပ်ပေါ်မှာဆက်နေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာရီကိန်းအလွှာအသုံးပြုသူများသည်ကမ္ဘာအနှံ့နောက်ဆုံးပေါ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်း၏ထိပ်နှင့်ဟာရီကိန်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်နေဖို့ခွင့်ပြု; လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုခြေရာခံနှင့်၎င်းတို့၏ IFR လေယာဉ်ခရီးစဉ်အစီအစဉ်များနှင့်လမ်းခရီးဖော်ပြရန်စွမ်းရည်ကို၎င်း, "Wildfire" အလွှာအပါအဝင်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအလွှာထပ် AIRMETs, SIGMETs နှင့်အခြားလေကြောင်း-related ဒေတာ, အသုံးပြုသူများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းနောက်ဆုံးပေါ်မီးလှုပ်ရှားမှုရင်ပေါင်တန်းနေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒေတာအလွှာအပြင်, MyRadar ထိုကဲ့သို့သောလေဆင်နှာမောင်းနှင့်ပြင်းထန်သောမိုးလေဝသသတိပေးချက်များအဖြစ်အမျိုးသားမိုးလေဝသစင်တာမှသတိပေးချက်များ, အပါအဝင်ရာသီဥတုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိပေးချက်များပေးပို့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ MyRadar ၏ဤဗားရှင်းမှာစတင်မိတ်ဆက်တစ်ဦးက feature အသစ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှင့်ဟာရီကိန်းလှုပ်ရှားမှုချွတ်အခြေစိုက်သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိရန်စွမ်းရည်များပါဝင်သည်; သင်ဘယ်အချိန်မဆိုတစ်ဦးအပူပိုင်းမုန်တိုင်းသို့မဟုတ်ဟာရီကိန်းပုံစံများကိုတစ်ဦးတပ်လှန့်ပို့ပေးရန် app ကို configure လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အဆင့်မြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
MyRadar အတွက်အများဆုံးအသုံးဝင် features တွေတစ်ခုမှာအဆင့်မြင့်မိုဃ်းရွာစေသသတိပေးချက်များပေးနိုင်စွမ်းရှိ၏ Hyper-ဒေသခံမိုးရေချိန်ခန့်မှန်းဘို့ငါတို့မူပိုင်-ဆိုင်းငံ့လုပ်ငန်းစဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရှိဆုံးတိကျသည်။ အဲဒီအစား App ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုစစ်ဆေးရှိခြင်း၏, MyRadar မိုဃ်းကိုရွာစေပြင်းထန်မှုနဲ့ကြာချိန်ပေါ်အသေးစိတ်ကိုအပါအဝင်ချမိနစ်မှ, သင့်လက်ရှိတည်နေရာမှာရောက်လာမည်သည့်အခါမှအဖြစ်ကြိုတင်တစ်နာရီမှသင်တစ်ဦးတပ်လှန့်ထပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်များကိုလူကြီးမင်းသင်တို့အဘို့အလုပျလုပျမြားနှငျ့မိုးရွာ hits မတိုင်မီကြိုတင်သင်သိပါစေလိမ့်မယ် - ။ သငျသညျကို on-the-go နေနှင့်အမြဲရာသီဥတုစစျဆေးဖို့အချိန်မရှိဘူးသည့်အခါဤအသတိပေးချက်အသက်ချွေတာနိုင်ပါတယ်
MyRadar အပေါ်ကိုယ်စားပြုရာသီဥတုအားလုံးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒေတာ In-အိမ်သူအိမ်သားဖွံ့ဖြိုးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံမြေပုံစနစ်, အပေါ်ပြသနေသည်။ ဤသည်မြေပုံစနစ်ကကမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်မြန်ဆန်စေသည်မူသောသင်တို့ devices များ GPU ကိုအသုံးပြုသည်။ သငျသညျ on-the-သွားလာရင်းအမြန်ရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်ရှာနေသည့်အခါ, တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ မြေပုံသင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ချဲ့ခြင်းနှင့်ရာသီဥတုဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာတူ၏အဘယ်အရာကိုမြင်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန်ပတ်ပတ်လည်ဝေ့ဖို့ခွင့်ပြုသည့်စံဖြစ်တော့ / zoom ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိပါတယ်။
ဟာရီကိန်းရာသီရဲ့ start အဘို့ကြီးသော - app ကို၏လွတ်လပ်သော features တွေအပြင်, အနည်းငယ်ထပ်တိုးအဆင့်မြှင့် Real-time ဟာရီကိန်းခြေရာခံခြင်းအပါအဝင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဟာရီကိန်း tracker တွင်အပူပိုင်းမုန်တိုင်း / ဟာရီကိန်းခန့်မှန်းချက်အပုဒ်ဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေများ၏ကန်တော့ချွန်အပါအဝင်အခမဲ့ဗားရှင်းအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးအပိုဆောင်းဒေတာ, ပေးပါသည်, ထိုသို့ကိုလည်းအမျိုးသားဟာရီကိန်းစင်တာမှအသေးစိတ်အနှစ်ချုပ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပရီမီယံအဆင့်မြှင့်တင်လည်းတဦးချင်းဘူတာကနေရေဒါ၏ သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်ခွင့်ပြုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေဒါဗူး, ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းတစ်ဦးချင်းစီရေဒါဘူတာကို select အဆိုပါရေဒါ tilt ထောင့်ကို select နှင့်လည်းပြသလျက်ရှိသည့်ရေဒါထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲအခြေစိုက်စခန်းထင်ဟပ်လေတိုက်လျင်အပါအဝင်နိုင်သည် - အတွေ့အကြုံရှိရာသီဥတုရိုက်ကူးခြင်းအဘို့ကြီးသောဖြစ်နိုင်သောလေဆင်နှာမောင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာဆက်နေရန်လှပါတယ်။
ရာသီဥတုဆိုးရွားနှင့်အတူကိုယ်ရံတော်ကိုချွတ်ဖမ်းမိရမနေပါနဲ့, ယနေ့ MyRadar ကို download လုပ်ပါကစမ်း!
MyRadar Weather Radar အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MyRadar Weather Radar အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MyRadar Weather Radar အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
MyRadar Weather Radar အား အခ်က္ျပပါ
daddyappsupply စတိုး 1 229
MyRadar Weather Radar ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ရာသီဥတု အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း MyRadar Weather Radar အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.6.2
ထုတ်လုပ်သူ ACME AtronOmatic
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://myradar.com/privacy_policy.html
App Name: MyRadar Weather Radar
File Size: 37.48MB
Release date: 2019-09-03 05:37:26
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: armeabi-v7a, arm64-v8a
လက်မှတ် SHA1: A1:6A:02:4E:9D:21:8F:3E:AD:FD:53:38:A6:66:68:4F:4F:F4:0E:D0
အဖွဲ့အစည်း (O): ACME AtronOmatic
နယ်မြေ (L): Orlando
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): FL
MyRadar Weather Radar APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ